people Nepal » तराई मधेसमै छठपर्वमा जातीय विभेद ! तराई मधेसमै छठपर्वमा जातीय विभेद ! – people Nepal
तराई मधेसमै छठपर्वमा जातीय विभेद !
रौतहट, १० गते कात्तिक । परापूर्वकालदेखि तराई मधेसमा मनाइँदै आइएको लोकपर्व छठ पछिल्लो समय लोकप्रियता बढेर देशव्यापी बनेको छ । अहिले राजधानी काठमाडाैँ र पोखरामा मात्र नभई कतिपय ठाउँका मुुस्लिम समुुदायले पनि उत्साहका साथ छठपर्व मनाउन थालेका छन् तर तराई मधेसमै छठपर्वमा जातीय विभेद भने कायमै रहेको देखिएको छ ।